တစ်နေ့နေ့တော့ ~ မြတ်မွန်
Posted by မြတ်မွန် | 2/10/2010 11:53:00 AM | ကဗျာလိုလို
တစ်နေ့နေ့ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်လေး သူငယ်ချင်းအတွက် အမှန်တကယ်ဖြစ်လာပါစေ...။
ကံမကုန်ရင်ပြန်ဆုံကြမှာပါ အားမငယ်ပါနဲ့ 
တစ်နေ့ နေ့ ရောက်ခဲ့ ရင် . . . . . . Good Luck
2/10/2010 8:11 PM
မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်းမှာလည်း ဆုံမှတ်တော့ ရှိပါတယ်။ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းရှိနေသမျှ မမြင်နိုင်တဲ့ နေရာတနေရာမှာတော့ ဆုံမှတ်ရှိနေပါတယ် မွန်ရေ..။ အားမငယ်ပါနဲ့..။
အင်း တနေ့နေ့ပေါ့လေ။ အဲဒီ တနေ့နေ့ဟာ ပြက္ခဒိန်ထဲတော့ ပါဖို့ လိုတယ်နော်။
2/10/2010 9:00 PM
2/10/2010 11:16 PM
အစ ရှိလို့ အဆုံး ရှိတာပါ..
အဆုံး ရှိလို့လည်း အစ ရှိတာပေါ့...
ဒီတော့ အဆုံး အစ ရှိတဲ့ မိုးကုတ်စက်ဝိုင်းကြီးထဲမှာ
မဆုံရင်လည်း ကံမပါလို့ ဆုံရင်လည်း ကံပါလို့ပေါ့ဗျာ...
ပြောသာပြောနေရတယ်.. ဟုတ်ကောဟုတ်လို့လားမသိဘူး ...း)
အချိန်မတန်ခင် ခပ်စောစောလေး ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ် ..း))
2/11/2010 3:39 AM
ဘယ်နေ့လဲဟင်... တနေ့နေ့တော့ဆိုလို့ ဘယ်နေ့လဲလို့ မေးတာပါ..။ ဒါနဲ့ ကံမကုန်ရင် ပြန်ဆုန်မယ် ဆိုတော့ ကံကုန်ရင် ပြန်ကုန်မယ် ဆိုတာလဲ ထည့်တွက်ဦး(သေရွာ)ဒီတော့ တနေ့နေ့တွေ ဘာတွေ လုပ်မနေနဲ့ ဆုံချင်တယ် မဟုတ်လား လိုက်သွားသူ့ဆီကို။
ကိုဏီးကတော့ ကံမကုန်သေးရင် ဘလော့ရေးတဲ့ မောင်နှမတွေနဲ့ အတူစုံပြီး တစ်ခါလောက်တော့ ဖန်ခုန်တမ်း ကစားချင်သေးသဗျား....း))
2/11/2010 7:51 PM
အတူပြန်ဆုံနိုင်မယ့်တစ်နေ့ နေ့ ကိုအမြန်ရောက်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။
2/11/2010 8:44 PM
2/11/2010 10:49 PM
2/11/2010 11:22 PM
အခုတလော ကဗျာတွေပဲ ဓါတ်ကျနေတယ် ထင်တယ်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ်ရာ အဆုံးသတ်မယ့် နေ့ကို လူတိုင်း မျှော်လင့်ကြပါတယ်လေ
2/12/2010 3:02 AM
ကံမကုန် သေးသ၍ ပြန်ဆုံ တွေ့ခွင့်တွေ ရှိပါသေး တယ်ဗျာ. ပြန်ဆုံနိုင်ပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးပါတယ်.။
2/12/2010 2:03 PM
သြော်... ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကဗျာစာသားလေးပါလား... အမမြတ်မွန်ရယ်.... တနေ့နေ့တော့တဲ့လား.... ဖတ်ပြီးတော့ အရိပ်တွေ ဖြတ်သန်းသွားတယ်.... ပြောမပြတတ်ဘူး.. ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ ဖတ်ပြီးတော့ နည်းနည်းဝမ်းနည်းသွားတယ်ဗျာ....
ပြောချင်တာက ပြန်မဆုံ နိူင်တော့ တဲ့မီးရထား
သံလမ်း နှစ်ကြောင်းလို ဖြစ်နေပေမဲ့အခါခါ ခုံနေတတ်တဲ့
ရင်ခုံသံချင်းကတော့နီးစပ်နေနိူင်ကြပါတယ်လို့ ။
အဓိက ကတော့ချစ်နေကြဘို့ချစ်တာကို သိနေ
ာကဘို့ ပါပဲလို့ ။ ခံစားကြည့် လို့ ရပါတယ်လေ။
တကယ် ခံစားပြီး မန့် ခဲ့ မိပါတယ်ဗျာ။
2/14/2010 9:19 PM
မတူညီတဲ့မျဉ်းပြိုင်နှစ်ကြောင်း လို့ လွဲချကြပေမယ့် တကယ်ချစ်ကြတဲ့ချစ်သူတွေ ကံကိုမယုံဘဲ ဆုံဆည်းဖို့ကြိုးခဲ့ကြတယ်။ တစ်နေ့နေ့တော့ ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေအပြည့်နဲ့ပေါ့ တကယ်ဘဲ ဆုံဆည်းခဲ့တဲ့ ရာဇ၀င်တွေ အများကြီးပါပဲ အားမငယ်ပါစေဖို့ပါ...
2/15/2010 12:38 AM
မြန်မာပရိသတ်အကြိုက် အဆုံးသတ်မျိုးနဲ့ အဆုံးသတ်ပါစေလို့....
2/15/2010 6:32 AM
2/16/2010 12:01 AM
ကဗျာလေး လာဖတ်သွားပါတယ် ညီမလေးရေ..
ကဗျာလေး ကောင်းလိုက်တာ။ အစ်မတော့ ကဗျာ မရေးတတ်တော့ ကဗျာရေးတတ်သူတွေဆို တအား အားကျတာ..
ကဗျာဖတ်ပြီး ရင်ထဲ နင့်သွားတယ်...
2/18/2010 3:07 AM
စိုင်းရောက်တယ်။ အလုပ်ရှုပ်နေမှန်းသိပေမယ့် မလာတာကြာတော့ သိပ်သတိရတယ် မွန်ရေ..။ တစ်နေ့နေ့ဆိုတာ အဝေးကြီးလားဟင်?
3/13/2010 12:25 AM
အဲ ... ဒီ ညီမလေး လည်း
အလွမ်းတွေ နဲ့ ပါလား ... :)
4/30/2010 2:46 PM
1/09/2013 5:26 PM